Nampianjoria ahy i Lisy – Ny soratro
aleasterx	Non classé	 6 août 2018 0 Minutes
Ny famintinana ilay tantara nalefany tamiko koa dia tena nahasarika tanteraka. Hafa kely ilay tantara, toa misy Antananarivo nefa tsy Antananarivo, nefa Antananarivo ihany raha tena dinihana. Antananarivo hafa kely. Hiverenako etsy ambany ny momba izay rehefa avy eo. Efa ela manko ny tena no te hamaky boky amin’ny teny gasy. Ny vitsy ananako ato an-trano efa voavakiko avokoa, saingy tsy ampy ny…
Previous Post Indray andro hono…
Next Post Twanapero